पेटमा बोसो लाग्न थाल्यो ? त्यसो भए यी खानेकुरा खानुस्, पेटमा बोसो पगाल्नुस् ! – Halkhabar kura
२४ भाद्र २०७७, बुधबार १२:३२
२.ग्रीन टीः केही समयदेखि निकै लोकप्रियता पाएको ग्रिन टि स्वास्थ्यको लागि लाभदायक रहेको छ । जसमा क्याटेचिन्स नामको यौगिक तत्व हुने भएकाले शरिरमा भएको अतिरिक्त बोसोलाई कम गर्न सहयोग गर्छ ।
५.दालचीनीः तौल कम गर्नको लागि दालचिनी निकै उपयुक्त हुन्छ । बिहानको नास्ताभन्दा पहिले र राती सुत्नुभन्दा अगाडी दालचिनीको प्रयोग गर्नुहोस् । त्यसको लागि एक कप पानीमा एक चम्चा लादचिनी पाउडर मिसाउने । यो एक प्रकारको पेय पदार्थ भएकाले दैनिक दुइ पटक पिउँदा केही दिनमा नै यसको असर देख्न सकिन्छ ।
६.स्याउः स्याउमा पाइने पोटासिमयमले शरिरमा बढिरहेको बोसोलाई कम गर्छ । धेरैबेर भोक लागेको महसुस पनि स्याउने कम गर्छ ।
७.ओमेगा थ्रीले भरपुर खानेकुराः तोफु, पालुङ्गो, चिज, ओखर, अण्डा जस्ता खानेकुरामा ओमेगा थ्री तत्व पाइने भएकाले यस्ता चिजले शरिरमा जमेर रहेका अतिरिक्त बोसोलाई हटाउन सहयोग पुर्याउँछ ।
Next रोगसँग लड्ने कि समाजसँग ? पढेर प्रतिक्रिया दिनुहोस